Review – ZEUS Myanmar
No Comments on Just Beyond (2021)
Halloween အတွက် Disney + ကနေပြီးတော့ Halloween အမှီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုထွက်လာပါတယ်။ Comedy/ Horror အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Creeped out တို့ Creep show တို့ကိုကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် သဘောကျစေမယ့် ဇာတ်လမ်းလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
Creeped out လိုပဲ အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ Adventure တွေကို ပြထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ Halloween မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းမှာ အပိုင်း၈ ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။
1. Leave them kids alone
2. Parents are from Mars, kids are from Venus
3. Which witch ?
4. My Monster
6. We’ve got spirits, yes we do
7. Standing up for yourself
Episode တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေက Sci Fi, Thriller ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တောင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမှာပါ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ကတော Leave them kids alone, My Monster နဲ့ Unfiltered တို့ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကလေးတွေရဲ့ Adventure တွေကိုပဲပြတာ မဟုတ်ပဲ တချို့ Episode တွေမှာ တကယ်ရင်ထဲထိအောင် ပြနိုင်တာမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်။
၁ ပိုင်းကို မိနစ် 30 လောက်ပဲ ပါတာမို့ အချိန်လည်း သိပ်မကုန်ပါဘူး။ 90s show တွေကို အခုခေတ်မှာကြည့်ရသလို Vibe ရတယ်။ ယုတ္တိမရှိတာတွေကိုက ကြည့်လို့ကောင်းနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ 90s show တွေကလည်း အဲ့လိုအထာတွေချည့်ပါပဲ။
IMDb Rating က 5.9 သာရထားပေမယ့် Rotten Tomatoes ကတော့ 100% အထိရထားပါတယ်။ ကလေးတွေရော လူလတ်ပိုင်းအထိ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် Series မို့လို့ Review ပေးထားပါတယ်။ Halloween မှာ Just Beyond လေးကြည့်ပီး Creeped out ဖြစ်ကြပါစေ ။
Gosu Webtoon Review
No Comments on Gosu Webtoon Review
အနောက်ပိုင်း Comic တွေဖတ်ရတာ သိပ်မကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့လို လူတွေအတွက် webtoon review လေးတစ်ခု တင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် သိပ်မရှိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ ကာတွန်းသာသာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း art အပိုင်းမှာရော အတော်တိုးတက်လာပြီး တကယ်ကောင်းတဲ့ webtoon တွေထွက်လာကြပါပြီ။ အခုနောက်ပိုင်း Webtoon တွေဟာ Anime အဖြစ်နဲ့လည်းကောင်း Movies တွေ series တွေအဖြစ်နဲ့ပါ မြင်တွေ့ရလာတဲ့အခါ Webtoon တွေဟာလည်း Japanese manga တွေလို အရေးပါလာပြီးလို့ ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော့လို အနောက်ပိုင်း comic တွေဖတ်ရတာလည်း ပျင်း coloring လေးနဲ့ မှဖတ်ရတာကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် korean webtoon တွေဟာရွေးချယ်စရာဖြစ်လာပါပြီ။
ကျွန်တော် အခု review လုပ်မယ့် webtoon ကတော့ Gosu ဆိုတဲ့ webtoon လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gosu ကိုတော့ Ryu Ki-Woon ကပုံဖော်ထားပြီး Mun Jeong Hoo မှ ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Art အပိုင်းကတော့ အဲ့ဘက် သိပ်နားမလည်တဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ Battle တွေဘာတွေ ဆွဲထားတာ တော်တော်မိုက်တယ်လို့ တော့ထင်တာပဲ သိပ်တော့မသိပါဘူး :3
2015 ကစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ် 2021 မှာ webtoon ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Season ၂ ရှိပြီး season နှစ်ခုပေါင်း chapter 233 ခုရှိပါတယ်။ Webtoon rating 9.9 ရှိတဲ့ webtoon တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Gosu webtoon အပြင် Yongbi The Invicible Manga(1999-2002)နှင့် Yongbi The Invicible:a side story(2006) ဆိုပြီး universe တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။
Jujutsu Kaisen Director ဖြစ်တဲ့ Sung Hoo Park က သူ adaptation လုပ်ပေးချင်တဲ့ Webtoon ထဲ Gosu က ထိပ်ဆုံးလို့ ပြောဖူးတဲ့အတွက် anime adaptation မဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
ဟုတ်ပြီ… ဇာတ်လမ်း Info ဘက်သွားလိုက်ရအောင်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ martial art, supernatural ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Doko yang ဆိုတဲ့ No.1 martial art master ကြီးဟာ သူတပည့်တွေဂျောက်တွန်းခြင်းခံရပြီး ပြိုလဲသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူဟာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ကို သူ့ပညာတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပေးပြီး လက်စားချေခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Webtoon ဆိုတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းကရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ webtoon ရဲ့အားသာချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် character development ပါ ဘေးက side character တွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကအစ အသေးစိတ်ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်အားသာချက်ကတော့ plot ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ကရိုးရှင်းပေမယ့် ဇာတ်အချိုးအကွေ့တွေမှာ ဟာခနဲဟင်ခနဲ ဖြစ်စေတဲ့ plot တွေက ပိုပြီးဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ hallucinations တွေပါတာကြောင့် hallucinations ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် plot တွေ twist တွေနဲ့ တကယ်ဖတ်ရတာတန်မယ့် webtoon တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Injustice ( 2021 ) honest review
No Comments on Injustice ( 2021 ) honest review
October 19 မှာ Official ထွက်ရှိလာမယ့် Injustice ဟာ မထင်မှတ်ပဲ အစောကြီး Leak ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ သင်က Injustice Comic ကိုအရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင်အောက်ကစာကိုဆက်မဖတ်ပါနဲ့တော့။ ( ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် )အချိန်ကုန်မခံချင်ဘူးဆိုရင်သွားကိုမကြည့်ပါနဲ့တော့။
Warner Bros animation ရဲ့ DC animation တိုင်းဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ Plot ပိုင်းရော Animation ရောမှာ အသင့်သင့်ကောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုကတော့ တကယ်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်ရတဲ့ ပထမဆုံးကားပါပဲ။ Injustice Comicနဲ့နည်းနည်းလေးမှကိုယှဉ်လို့မရတာမလို့ Comic အကြောင်းတော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။
စလာတည်းက အားမရတာကတော့ Animation ပါ။ Style တွေဟာကြည့်ရတာဆိုးရွားပြီး Error တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ Plot ကလည်း ဘာမှဆန်းပြားတာမရှိတဲ့အပြင် အလည်လောက်မှာတင် Ending ကိုပြောလို့ရနေပါပြီ။ မျှော်လင့်ထားသလို Superman ကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသတ်ဖြတ် တဲ့ Injustice ဆိုတဲ့ Vibe မျိုးကို လုံးဝကိုမရလိုက်တာပါ။ Character တွေအများကြီးထည့်ပြီး ကောင်းကောင်းလည်းအသုံးမချသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Injustice Comic နဲ့ ယှဉ်ဖို့နေနေသာသာ ဒီ့အရင်ထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Justice Society WW2နဲ့ယှဉ်ရင်ကို ဆီနဲ့ရေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်မှာတော့ ထွက်ခဲ့သမျှ DC animation ထဲ အညံ့ဆုံးပါပဲ။
Own Rating 4/10
Marvel MCU Review
သဘောတွေ့စေတဲ့ SHANG-CHI Soundtrack
No Comments on သဘောတွေ့စေတဲ့ SHANG-CHI Soundtrack
MCU ဟာ SHANG-CHI ကို Black Panther လိုမျိုးချပြနိုင်ဖို့အတွက် သေချာပြင်ဆင်ထားတာကို Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album မှာလဲ မြင်နိုင်ပါတယ်။
MCU မှာ James Gunn ရဲ့ Guardians of the Galaxy films ထဲ the Awesome Mix playlists ဟာဆိုရင် Marvel fan တိုင်းမကြိုက်တဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲ။ Black Panther ရဲ့ Soundtrack album ဆိုရင်လဲ Culture အငွေ့အသက်တွေနဲ့ တော်တော်ကိုမိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Thor: Ragnarok ရဲ့ Immigrant Song တို့ Iron Man ရဲ့ Back in Black တို့ဆိုရင် MCU ရဲ့ Iconic နီးပါးဖြစ်တဲ့အထိကို Fan တွေမျက်လုံးထဲ(နားထဲ) တွဲမြင်ကြပါတယ်။
အဲ့လို အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ MCU ဟာ ဒီ ၁ ခါမှာလဲ SHANG-CHI ရုပ်ရှင်အတွက် Soundtrack ကောင်းကောင်း ဖန်တီးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Soundtrack အတွက် Los Angeles အခြေစိုက် hip-hop label ၁ ခုဖြစ်တဲ့ 88rising ကို Executive producer အဖြစ် ကိုင်ခိုင်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ Asian နဲ့ Asian-American artist တွေကို ခေါ်ယူပြီး ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
Shang-Chi soundtrack Album ရဲ့ features တွေကတော့ Anderson .Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake… တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ထူးခြားတာက Asian-American artist တွေအပြင် Korea တို့၊ Japan တို့ Philippines တို့ ချင်းချောင်တို့က စတဲ့ Asian က Artist တွေပါခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Korea ကဆိုရင် Zion. T, Seori, BiBi လေးနဲ့ DPR Live တို့ DPR Ian တို့ပါ ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
“Nomad”ဆိုရင် ဂျပန် singer-songwriter Gen Hoshino နဲ့ ကိုရီးယားက Zion T တို့ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတာမျိုးတွေပါတွေ့ရပါတယ်။ Bibi လေးနဲ့ GOT7အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Mark တို့ collaborated လုပ်ထားတဲ့ “Never Gonna Come Down.”တို့… Rookie artist Seori sung နဲ့ Indonesian rapper Warren Hue တို့ပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ “Warriors”တို့… ဆို ထူးထူးခြားခြားမြင်ရတဲ့ Track တွေပါပဲ။
နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ Streaming Platform တော်တော်များများမှာရနေပြီမို့အလွယ်တကူရှာနားထောင်လို့ရပါပြီ။ ဒီ ၁ ခါ MCU ရဲ့ Soundtrack ကတော့ Asian taste ကိုတဝကြီး ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
What if…? Episode4(Review)
No Comments on What if…? Episode4(Review)
What if…? Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands? Episode4(Review)
What if….? Series ရဲ့ စတုတ္ထမြောက် အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ What If Dr.strange lost his heart instead of his hands ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းလောက်ကပဲ Disney + မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ ။
ဒီ အပိုင်းကတော့ ထွက်ခဲ့သမျှ အပိုင်းတွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့
အကောင်းဆုံးနဲ့ emotional အဖြစ်ဆုံး အပိုင်းလို့တောင် ပြောလို့ ရပါတယ် ။ Plot ပိုင်းကလည်း အရင်ပိုင်းတွေနဲ့မတူဘဲ တော်တော်လေး fucked up ဖြစ်လာတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ။
အရင်ပိုင်းတွေက narrator အဖြစ်သာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Watcher ကြီးရဲ့ role ကလည်း ဒီအပိုင်းမှာ အရေးပါလာသလို အရင်အပိုင်း တစ်ခုက villain ကြီးတစ်ဦးလည်း ပြန်လည်ပါဝင်လာပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး Dr.strange2ကို hint ပေးတဲ့အနေနဲ့လည်း တစ်ချိူ့ scene တွေမှာ horror theme နဲ့ creepy tone တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ် ။ အဲ့အပြင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ plot twist တွေကလည်း တော်တော်လေး surprise ဖြစ်စေပါတယ် ။ အဓိကကတော့ ဒီထဲမှာ Dr.strange ရဲ့ မတူညီတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ side နှစ်ခုကို
ယှဥ်ပြသွားတာက တော်တော်ကို လန်းတာပါ ။ runtime တိုတိုနဲ့ character development ကို အကောင်းဆုံး ပြသွားနိုင်ပါတယ် ။ ဒီပတ်အပိုင်းကတော့ လုံးဝကို on fire ပါပဲ ။ ကြည့်နေရင်း ထိုင်ရာက မထချင်လောက်အောင်ကို ရှယ် entertaining ဖြစ်ပါတယ်။
Animation ပိုင်းကတော့ အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကို ကောင်းနေတုန်းပါ ။ Effect တွေ Landscape တွေကလည်း အရင်အပိုင်းတွေလို detail ကျကျ လှနေတုန်းပါပဲ ။
ဒီပတ် Episode ကတော့ တကယ့်ကို worth to watch ဖြစ်လို့ မကြည့်ရသေးရင် သွားကြည့်လိုက်ဖို့ recommend ပါတယ်ဗျ ။
[ Written By Weasel ]